राजनीति – Bikas Times
काठमाडौ । प्रदेश नं २ का ८ जिल्लामा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी छ । साँझसम्म करिब १२० स्थानीय तहको मतगणना सुरु भैइसकेको छ । जसमध्ये ११६ स्थानीय तहको प्रारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । सार्वजकि भएको विवरण अनुसार कांग्रेसले ४३ स्थानीय तहको प्रमुख पदमा अग्रता लिएको छ । त्यस्तै नेकपा एमालेले २१ …
काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको आज दुई वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी भएको दिनलाई विशेष उत्सवका रुपमा आज विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइँदै छ । सरकारले संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह गरी सरकारले राष्ट्रिय उत्सव मनाउँदै छ । सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा …
पूर्वसांसदहरुले कुनै सुविधा नपाउने
काठमाडौं । पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा सम्बन्धी विधेयक उपसमितिबाट पारित भएको छ । उपसमितिबाट पारित भएको बिधेयकमा संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यले कुनै सुविधा नपाउने उल्लेख छ । बिधेयकमा सुविधा पाउने पूर्वपदाधिकारीको मृत्यु भएमा निजले उपयोग गरेको सवारी साधन तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ७ मा संविधानसभाका सदस्य, …
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा यस्तो छ ठुला दलको तयारी
कांग्रेसले २ असोजपछि मात्रै तयारी थाल्ने काठमाडौ । कांग्रेसले प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी थाल्ने भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । ‘प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतृत्व प्रदेश नं. २ मा व्यस्त हुनुहुन्छ । शनिबारसम्म सबै नेताहरू फर्किएपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमै ध्यान केन्द्रित हुन्छ,’ केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव …
डा कोइरालाले भन्नु भो -प्रचण्ड जी छोएर त हेर्नुस
सर्लाही । नेपाली कागे्रसका प्रभावशाली नेता डा शेखर कोइरालाले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जगंली ब्यवहार छोडन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रदेश नं २ को स्थानिय तहको निर्वाचनको प्रचार प्रसार अभियानमा सर्लाहीको धनकौल गाउपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा नेता कोइरालाले तिन दिन अगाडी प्रचण्ड र गृहमन्त्री जर्नादन शर्माले आफ्नो पार्टीलाई मत नदिने लाई कार्वही गर्ने धम्की प्रति …
प्रधानमन्त्री देउवाको सय दिनका दश उपलब्धि
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले सत्ता छोडदा भएका सबै अधुरा कामलाई निरन्तरता दिने काम भएको छ । देउवा नेतृत्व सरकारले जस कमाएको छ । तर पछिल्लो दिनमा मन्त्रीपरिषदमा सदस्य थपेर अपजस खेपिरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको सय दिन उपलब्धि ० प्रदेश …
मधेशमा कांग्रेसलाई पहिलो बनाउन डा. शेखर सक्रिय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र कोइराला परिवारको अलग्गै पहिचान छ । जब कांग्रेसभित्र कोइराला परिवार सजग बन्छ, तब कांग्रेसले सकरात्मक परिणाम हात पार्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भएपछि अलमलमा परेका कांग्रेस पछिल्लो समय रणभुल्लमै परेको छ । निर्वाचनका समयमा भएका अदृश्य खेल र टिकट वितरणमा गरिएको मनपरीले कांग्रेसका हजारौं कार्यकर्तालाई निराश बनाएको छ । तिनै निराश …